मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १२ स्थानमाथि उक्लियो – Chandra Singh Shrestha
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले विहीबार जापानको टोकियोबाट सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ मा नेपाल १ सय ४५ औं स्थानमा छ । २०१३ मा नेपाल १५७ औं स्थानमा थियो ।
तर, नेपाल अझै न्यून विकसित मुलुकको सूचीमा छ । न्यून विकसित मुलुकको शीर्ष स्थानमा रहेको नेपालको अंक ०.५४० छ । अब नेपालले केही सुधार गर्ने हो भने मध्यम विकसित मुलुकको सूचीमा पर्न सक्नेछ । विकसित मुलुकको सूचीको पुछारमा १४२ औं स्थानमा रहेको इक्वेटोरियल गिनीको ०.५५६ अंक छ ।
सार्क मुलुकमा श्रीलंका विकसित मुलुकको सूचीमा परेको छ भने माल्दिभ्स, भारत, भुटान र बंगलादेश मध्यम विकसित मुलुकको सूचीमा परेका छन् । नेपालसँगै पाकिस्तान र अफगानिस्तान भने न्यून विकसित मुलुकको सूचीमा छन् ।
कुन मुलुक कहाँ ?
दक्षिण एशियाको श्रीलंका ७३ औं स्थानमा छ । मालदिभ्स १०३ औं स्थानमा छ र मध्यम विकसित मुलुकको शीर्ष स्थानमा पनि हो । भारत १३५ र भुटान १३६ औं स्थानमा छन् भने बंंगलादेश १४२ औं स्थानमा छ ।
अफगानिस्तान एशियामा सबैभन्दा कमजोर अर्थात १६९ औं स्थानमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रतिव्यक्ति आय लगायतका मानकहरुका आधारमा एनडीपीले विश्वका १८७ देशको मानव विकास सुचकांक सार्वजनिा गर्ने गरेको छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/07/172923/#sthash.I5KMuRk3.dpuf
← संक्षिप्‍त नेपाली शुद्धाशुद्धि ज्ञान
आँधीको न्वारन कसरी गरिन्छ ? →
2 thoughts on “मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १२ स्थानमाथि उक्लियो”
Chandra ShresthaPost author
Thank you Janak sir.